Icho chikonzero nei ketani block ichitsvedza
Wakatombosangana nemamiriro ezvinhu akadaro: panguva yekushandisa cheni chitakuriso, hokoyo inosungira, izvozvi, chimwe chezvinhu chichaita kuti cheni isungirire idiki rekukweshera, saka ndechipi chikonzero chinoita kuti kupesana kuvepo disk slip? Tevere, ini ndinokuzivisa iwe chimwe chikonzero ...
Magadzirirwo uye matanho ekudzivirira kweKushandiswa kweWebbing Sling
Nokusimudza chipfuramabwe bhandi anoshandiswa nevakawanda mugungwa, peturu, zvokufambisa uye mamwe maindasitiri. Izvo zvine huremu hwakareruka uye kugona kwakanaka. Ichi chigadzirwa chinonyanya kudiwa nevashandisi uye zvishoma nezvishoma chakatsiva tambo tambo zvidhina mune zvakawanda zvinhu. Kuti uve nechokwadi chekugara kwenguva refu kwechifuramabwe, chii s ...
Nhanganyaya kune chengetedzo chishandiso cheASAKA HHBB yemagetsi cheni chitakuriso
HHBB yemagetsi cheni chitakuriso ndiyo inodhura-inoshanda yemagetsi cheni hoist yakatangwa nekambani yedu. Pazasi apa isu tinopa yakadzama sumo kune chengetedzo chishandiso cheiyi magetsi sunga: 1. Mota brake "Electromagnetic brake" yakasarudzika dhizaini dhizaini. Hunhu hwayo ndewekuti kunyangwe iwe ...
Maitiro ekubata nekukurumidzira kwemagetsi hoist
Kuti ubate netsaona dzinongoitika dzakabudirira nenjodzi yemidziyo, zvirongwa zvinotevera zvekukurumidzira zvinogadzirwa: 1.Kana uchishandisa mini magetsi hoist 200 kg uye paine kukundikana kwemagetsi kamwe kamwe, vanhu vanofanirwa kurongeka kuchengetedza nzvimbo, kumisa zviratidzo zvekurambidza kutenderedza nzvimbo yebasa, uye sen ...
Maitiro akajairika ekuongorora e lever hoists
Kune nzira nhatu dzinowanzo shandiswa dzekuongorora dze lever hoist: visual visual, test kuongorora, uye braking performance performance. Pazasi isu tichatsanangura idzi nzira dzekuongorora zvakadzama imwe neimwe: 1. Kuongorora kunoonekwa 1. Mativi ese eratchet lever hoist anofanirwa kugadzirwa zvakanaka, ...
Nei magetsi achisimudza zvakakosha?
Iyo indasitiri yekusimudza ine hukama hukuru nemagetsi emagetsi. Mazhinji mapurojekiti anoshandisa mini magetsi hoist 500kg. Unogona kuda kuziva kuti nei kubuda kweiyi magetsi tambo yemuchina ichitipa rubatsiro rwakakura kudai? Mune mamwe mazwi, hunyanzvi hwakawanda sei huripo hweiyi hoi yemagetsi ...
Mashandisiro Aungaita Iyo Ratchet Tie Pasi
Iwo akatakura ratchet tambo anoita basa rakakura mukutakura, kufamba, kutumira kana kuchengetedza zvinhu. Mushure mekuvharirwa, chinhu chinonetsa kudonha uye kuchengetedza chinhu kubva mukukuvara. Basa hombe kusimbisa. 1. Structural maficha Iyo ratchet tai pasi isanganiswa ye s ...
Kubatsira kwaASAKA Ratchet Sunga Pasi
1. Akasununguka uye akasimba ASAKA nhumbi tambo dzinogona kuburitsa angangoita zviuru zviviri zvemapaundi ekudhonza simba, kuunza nhumbi inokwenenzvera bhandi padyo nepamusoro pechinhu chinosunga chemhando dzakasiyana, ichiita kuti ive yakasimba uye yakachengeteka. Inonyanya kukodzera kugadzirisa zvisina kujairika zvinhu. 2. bhandi renhumbi rakagadzirwa ...
Nyaya dzinoda kutariswa mukushanda kweMagetsi Hoist Wire Rope
Izvo zvinhu zvinoda kutariswa mukushanda kwecd1 tambo tambo yemagetsi hoist ndeiyi inotevera: 1. Tambo dzetambo pane reel dzinofanira kuve dzakarongedzwa zvakanaka. Kana ivo vakapindirana kana kutsvedza, vanofanirwa kumiswa uye kugadziriswazve. Izvo zvakanyatsorambidzwa kudhonza uye kutsika t ...
Chenjedzo pakusarudza Bhodhoro Jack
Patakasarudza iyo hydraulic bhodhoro jack, pane zvinhu zvakawanda zvinofanirwa kufunga nezvazvo, semuenzaniso: 1, Tinofanira kusimbisa huwandu hwakatarwa hwatinoda, isu takakurudzira kusarudza iyo iyo iyo yakatarwa yekusimudza huremu ichakwira kupfuura mutoro. pamwe ne20%. 2.Body kukwirira uye sitiroko: Maererano t ...
Nzira yekuchengeta masiriri
Kune marudzi mazhinji ezvipfuramabwe. Kufanana nezvipfuramabwe zvakajairika, senge tambo dzetambo, ngetani nezvikorekedzo, tinofanirwa kuzvibata nekuzvichengetedza kuitira kudzivirira chipfuramabwe kuti chisarasike kana kushandiswa zvisirizvo. ngozi. Teerera kune anotevera mapoinzi kana uchichengeta: 1. Iyo isingaperi chipfuramabwe chinofanira kuiswa mu de ...
Hupenyu hwe ratchet tie pasi zvinoenderana nehunhu hwayo
Ratchet tie pasi inoshandiswa se ratchet tie pasi mukuvakwa kwetambo. Paunenge uchishandiswa, tanga kusunungura tambo yesimbi tambo kana kwakakurudzira waya yesimbi pane iyo tambo bhureki, uigadzirise pamuchinjiko ruoko, sunga waya yesimbi neiyo simbi, uye dhonza yakakosha wrench kubva pairi. Hupenyu hweratchet t ...
Magadzirirwo uye matanho kubva The Us ...
Nhanganyaya kune chengetedzo chishandiso cheASAK ...
Maitiro ekubata nekukurumidzira kwemagetsi ...
Fonera Isu Zvino: +86 13486165199